NAB Gosi News | 2021 NAB Gosi Onye Mmekọ na Onye Mmepụta nke NAB Show LIVE. Akụkọ Mgbasa Ozi Mgbasa Ozi | Peeji nke 2480 nke 40463 | 2021 NAB Gosi Akụkọ: Gụgharia Live, Podcasting, Engineering Engineering, TV & Radio Technology na Akụkọ Mgbasa Ozi. NAB Gosi 2021.
Onye Nkụzi Mepụta Mmepụta
Comments Off na Onye Nkụzi Production
1. Kuziere ụmụ akwụkwọ otu esi eji Final Cut Pro na Adobe Premiere maka idezi akụkọ.2. Na-akuzi ụmụ akwụkwọ iji ojiji Effects na Adobe CS5 maka mmezi agba na nsonaazụ ọhụhụ.3. Kụziere ụmụ akwụkwọ otu esi eji DaVinci Resolve emezi agba.4. Gota echiche ndi mmadu banyere igha agba, ya na nkuzi banyere nsuso, windo ike na ojiji nke scpes.5. Kụziere ụmụ akwụkwọ otu esi eji RED CINE-X mee ihe maka agba agba.6. Na-akuziri umu akwukwo ihe omume kachasi nma maka aru oru maka oru ngo ndi sitere na 16mm, 35mm, HDSLR, na RED Camera.7. Kọwaa echiche metụtara mkpakọ vidiyo na usoro.1. Oma nka di uku banyere agba ...
Comments Off na Injinia Mmepụta Post
Medialọ ọrụ mgbasa ozi na-eto eto na-achọ injinia vidiyo nwere ahụmahụ iji zụlite akụrụngwa nrụpụta post anyị. Ọnọdụ a ga-achọ mmekọrịta na ndị ọrụ nrụpụta post, nyochaa nsogbu, nchọpụta nsogbu, na ịza ajụjụ vidiyo. Kwesịrị inwe ahụmịhe na ịkparịta ụka n'postntanet na-emepụta ihe ntanetị na ntinye ihe nkesa. Dezie ọrụ nke mgbasa ozi mgbasa ozi na atụmatụ, mmepe, mmejuputa arụmọrụ na ngwaike. Jide ikike ịnye akwụkwọ, nkwado, na ndozi nke nkwukọrịta netwọk nke ụlọ ọrụ na akụrụngwa NLE. Onye ochichi kwesịrị inwe nghọta zuru oke banyere arụmọrụ Post Production. Kwesịrị inwe ahụmịhe na mbụ na ebe a na-emepụta post, ma ọ bụ ụlọ teepu.
Onye nhazi Post Post chọrọ maka ụlọ ọrụ na-eto eto na-eto eto, yana ọtụtụ ọrụ ugbu a. Onye nọ n'ọrụ a ga-ahazi ọtụtụ ndepụta anapụta, dezie usoro ihe omume, ma lekọta ndị njikwa na PAs. Na-achọ onye nwere nlebara anya zuru oke, na-akpali onwe ya, na-anụ ọkụ n'obi ịmụ na inye aka na nnukwu ụlọ ọrụ. Onye nhazi ga - emeso nnukwu netwọkụ dịka AMC, Vh1, Spike, HIST, Discovery, Bravo, A&E, yana ịrụ ọrụ na ngalaba Casting na Development anyị.
Onye na - enyere aka imepụta ihe - Oge nkebi
Comments Off na Production Assistant - Oge Oge
Onye ntụziaka onye na-ahụ maka nrụpụta ọrụ bụ ọnọdụ okike na-achọsi ike, na-achọ ikike onye isi na ịkparịta ụka n'netzọ. APD na Onye na-emeputa Mmepụta na-arụ ọrụ ma na-enyere aka na, gụnyere ihe ndị ọzọ, ogbugbu nke azụmahịa. Ọrụ a nwere ike ịchọ edetu, ịkọpụta ihe, ikwu okwu, mkpọsa ngwa ahịa, na ịma ọkwa ikuku na ọrụ ndị ọrụ. Nkọwapụta Job: Nyere aka na njikwa nke ndị ọrụ na - azụmaahịa na ibu ọrụWW na ndị AE na ndị ahịa iji mepụta ụdị ahaziri iche.Consult na ndị ahịa banyere okikeWrite, mepụta, na mkpọsa okwuRụa ma ọ bụ ad-lib iji mata ebe, iwebata ma mechie ihe ngosi, na ọkwa ụlọ ọrụ. na-agbajiSork na okporo ụzọ na ntanetị iji mesie ngwa ahịa niile ikuku n'ụzọ ziri eziMonitor ...
Onye isi oche Sr, Production Finance
Comments Off na Sr Director, Production Finance
Onye isi oche Sr, Ọnọdụ Ego Production ga-ebute ụzọ n'ịmepụta amụma na ngalaba ngalaba mmepụta ego na-arụ ọrụ dịka ọ metụtara nrụpụta ụlọ. Nke a gụnyere itinye n'ọrụ na ilekọta usoro azụmaahịa na-agbanwe agbanwe yana ịbịaru nso dịka o metụtara nhazi usoro na njikwa dị n'ime; Ọnọdụ ahụ ga-abụkwa ọrụ maka ịhazi ma mekwaa mmefu ego na ụlọ ọrụ niile edepụtara edepụtara maka otu elekere na ọkara elekere. Tụkwasị na nke a, ọnọdụ a ga-achịkwa ọrụ kwa ụbọchị maka Mmepụta Ego maka tbs na TNT. Nke a gụnyere ederede na ụlọ, mmepụta ikike. Isi ọrụ dị iche iche gụnyere ịkwadebe ihe ngosi ...
Comments Off na Director Production
Clear Channel Springfield MO na-achọ onye pụrụ iche ruru eru ka ọ bụrụ onye isi nke ngalaba mmepụta azụmaahịa dị ka onye na-ahụ maka Mmepụta na-emepụta; aghụghọ; Ọ na - arụkwa ụlọ ahịa dị n'ụlọ, na-eburu azụmahịa site na echiche gaa na ngwaahịa ikpeazụ. Gbuo ahia ahia n’ime ulo tinyere idekọ, ikwu okwu, agwakọta, ịdebe ngwa ahịa na ichekwa mkpọsaahịa. Nenye mmepụta ahia iji kwado ndị ọrụ. Nkwado okike nye ngalaba azụmaahịa gbasara mmepụta azụmaahịa gụnyere ide ederede azụmahịa dịka achọrọ. Soro ma gbazie mkpesa azụmahịa dị iche iche kwa ụbọchị. Ọrụ nke akụrụngwa ọdịyo dijitalụ .Ka anya na okporo ụzọ na ntanetị iji mesie ngwa ahịa niile aka n'ụzọ ziri eziAssist na ịlele akụkọ na-efu efu n'abalị…
Onye mmepụta ihe
Comments Off na Mmepụta Mmepụta
Music Diary Media Group, ụlọ ọrụ na-emepụta onwe ha, na-achọ ịgbazite Onye Mmepụta Mmepụta maka oru ngo nọọrọ onwe ya na-abịanụ, na-agbapụ Disemba 12 ruo 16 Ọ bụ ihe nkiri efu / nzuzu (nkeji 9). Anyị ga-agbapụ kpamkpam na akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ / ụda olu. Onye kachasị mma ga-enwe ahụmịhe na ihe ndị a na-achọ site na nsonaazụ anya na ịrụ ọrụ na VFX Supervisor. Anyị na-achọ mkpụrụ obi okike nwere ahụmịhe nrụpụta / ewu. Ọ bụrụ na ị jiri obere ọrụ rụọ ọrụ - nke ahụ bụ gbakwunyere.
AKW LKWỌ LAYOUT ARTIST
Comments Off na Production LAYOUT ARTIST
-Mkwadebe akwukwo-ndeputa dika imekorita ya na ndi n’ileputa ihe na ndi n’edeputa ya na ndi n’enye ahia-Mpu ahia nke ihe elektrọnik-Page layout (tinyere eserese / eserese na okike okpokoro) -Ihe edezi edezi -eme nkwadebe faili dijitalụ maka ndi n’eto akuko na mbipụta dijitalia. ọrụ metụtara ikikere na nwebiisinka-1-2 afọ nke mmepụta / ahụmịhe anya-Adobe CS6 site na iji nkwanye ugwu InDesign-Acrobat Pro-Microsoft Okwu mara aka na ojiji nke Mac-ekpughepụ na teknụzụ dijitalụ dị ka XML a gbakwunyere-QuarkXPress ahụmịhe chọrọ gbakwunyere kọleji chọrọ
Page 2,480 nke 2,490«Nke mbụ...2,4502,4602,470«2,4782,4792,4802,4812,482»...Ikpeazụ »